Abụ Ákwá 3 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Abụ Ákwá 3:1-66
Jeremaya kwuru otú obi dị ya nakwa ihe ọ na-atụ anya ya
‘M ga-echere’ (21)
Chineke na-eme ebere kwa ụtụtụ (22, 23)
Chineke dị mma n’anya onye na-atụ anya ya (25)
Ọ dị mma ka nwoke buru yok ya n’oge ọ bụ okorobịa (27)
Chineke ji ígwé ojii gbochie ndị ya ịbịakwute ya (43, 44)
א [Alef] 3 Ahụrụ m ndị nọ n’ahụhụ maka na Chineke ji ezigbo iwe taa anyị ahụhụ. 2 Ọ chụpụla m ma mee ka m na-eje ije n’ọchịchịrị, ọ bụghị n’ìhè.+ 3 N’eziokwu, ọ na-emesi m ike ụbọchị niile.+ ב [Bet] 4 O meela ka anụ ahụ́ m rekasịa. Ọ gbajisịakwala ọkpụkpụ m. 5 Ọ rụchibidola m mgbidi. O jirikwala nsí+ na ihe isi ike gbaa m gburugburu. 6 Ọ manyere m ka m nọdụ n’ebe gbara ọchịchịrị dị ka ndị nwụrụ kemgbe. ג [Gimel] 7 Ọ rụchibidola m mgbidi ka m ghara ịpụ. Ọ tụọla m ịga dị arọ ndị e ji ọla kọpa mee.+ 8 M tie mkpu kpọọ ya ka o nyere m aka, ọ naghị anụ ekpere m.+ 9 O jirila nkume a wara awa dochie n’ụzọ m. O meela ka ije ije n’ụzọ m na-aga na ya siere m ike.+ ד [Dalet] 10 Ọ na-aga zoo chebiri m otú anụ ọhịa bea ma ọ bụ ọdụm si echebiri anụ ọ chọrọ iri.+ 11 Ọ chụpụla m n’ụzọ m na-aga ma dọrie m.* O meela ka m tọgbọrọ chakoo.+ 12 O kweela ụta ya, tụgidekwa m akụ́ ya. ה [Hee] 13 Ọ gbaala akụ́* ndị dị n’akpa akụ́ ya n’akụrụ m. 14 Mmadụ niile na-achị m ọchị. Ha na-agụkwa egwú ha ji akwa m emo ụbọchị niile. 15 O meela ka m rijuo ihe na-elu ilu afọ, meekwa ka m tajuo ahịhịa na-elu ilu afọ.+ ו [Wọọ] 16 O meela ka m taa okwute tajie ezé. O meela ka m tụrụọ ná ntụ.+ 17 I meela ka obi ghara iru m ala.* Echefuola m ihe bụ́ aṅụrị.* 18 Ọ bụ ya mere m ji na-asị: “Mma m mara alaala n’iyi. Ihe m na-atụ anya inweta n’aka Jehova alaakwala n’iyi.” ז [Zayin] 19 Cheta na m nọ n’ahụhụ nakwa na enweghị m ụlọ.+ Chetakwa na m na-ata ahịhịa na-elu ilu na ihe na-egbu mmadụ.+ 20 Ị* ga-emecha cheta m. Ị ga-abịakwutekwa m* ma nyere m aka.+ 21 M bu ihe a n’obi. Ọ bụ ya mere m ga-eji chere gị.+ ח [Het] 22 Ọ bụ ịhụnanya Jehova mere* na anyị anwụchabeghị,+N’ihi na ebere ya anaghị agwụ agwụ.+ 23 Ọ na-eme ebere kwa ụtụtụ.+ Ọ bụ onye e kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe niile.+ 24 M* kwuru, sị, “Jehova bụ òkè m.+ Ọ bụ ya mere m ga-eji chere ya.”+ ט [Tet] 25 Jehova dị mma n’anya onye na-atụ anya ya+ nakwa n’anya onye* na-achọ ya.+ 26 Ọ dị mma ka mmadụ gba nkịtị*+ chere ka Jehova zọpụta ya.+ 27 Ọ dị mma ka nwoke buru yok ya n’oge ọ bụ okorobịa.+ י [Yod] 28 Ya nọrọ ọdụ naanị ya gbachi nkịtị, ebe ọ bụ na Chineke hapụrụ ya ka o buru ya.+ 29 Ya jiri obi ya niile na-edi ya ma kpudo ihu n’ájá.+ Olileanya dị na e nwere ike inyere ya aka.+ 30 Ya cheziere onye na-ama ya ụra ntì, ka mkparị jukwa ya afọ. כ [Kaf] 31 N’ihi na Jehova agaghị ajụ anyị ruo mgbe ebighị ebi.+ 32 Ọ bụ eziokwu na o mere ka anyị na-eru uju, ọ ga-emekwara anyị ebere n’ihi na ịhụnanya ya enweghị atụ.+ 33 N’ihi na ịta ndị mmadụ ahụhụ ma ọ bụ ime ka ha na-eru uju anaghị atọ ya ụtọ.+ ל [Lamed] 34 Iji ụkwụ zọpịa ndị mkpọrọ nọ n’ụwa,+ 35 Ikpe mmadụ ikpe mkpegbu n’ihu Onye Kacha Elu,+ 36 Na ikpe mmadụ ikpe arụrụala,Jehova kpọrọ ihe a niile asị. מ [Mem] 37 Ònyezi nwere ike ikwu ka ihe mee, ihe ahụ emee mgbe Jehova na-ekwughị ka o mee? 38 Naanị ihe na-esi n’ọnụ Onye Kacha Elu apụta bụ ihe ọma. Ihe ọjọọ anaghị esi n’ọnụ ya apụta. 39 Gịnị mere mmadụ dị ndụ ga-eji na-ekwu na obi adịghị ya mma maka na ọ na-ata ahụhụ mmehie ya?+ נ [Nun] 40 Ka anyị leruo àgwà anyị anya, chebakwara ya echiche,+ ka anyị laghachikwuru Jehova.+ 41 Ka anyị gbasaara Chineke bi n’eluigwe aka anyị ma jiri obi anyị niile gwa ya, sị:+ 42 “Anyị emehiela gị. Anyị enupụrụla gị isi.+ Ị gbagharabeghị anyị.+ ס [Samek] 43 I ji ezigbo iwe gbochie anyị ịbịakwute gị.+ Ị chụkwutela anyị ma gbuo anyị n’emeghị ebere.+ 44 I jirila ígwé ojii gbochie anyị ịbịakwute gị, ka ekpere anyị ghara irute ebe ị nọ.+ 45 I mere ka anyị dịrị ka ihe a jụrụ ajụ na ihe e kpofuru ekpofu n’anya mba dị iche iche.” פ [Pee] 46 Ndị iro anyị niile na-agwa anyị okwu ọjọọ.+ 47 Ụjọ na-atụ anyị mgbe niile. Olulu gbakwara anyị gburugburu.+ E bibiela anyị. Anyị tọgbọkwa nkịtị.+ 48 Anya mmiri si m n’anya na-asọpụta ka iyi maka na e bibiela ndị m.*+ ע [Ayin] 49 M na-ebe ákwá n’akwụsịghị akwụsị,+ 50 Ruo mgbe Jehova si n’eluigwe ledata anya hụ ihe na-eme anyị.+ 51 Ahụsiela m* anya n’ihi ihe na-eme n’ime obodo niile dị n’obodo m.+ צ [Sadee] 52 E nweghị ihe m mere ndị iro m, ha ana-achụ nta m ka à ga-asị na m bụ nnụnụ. 53 Ha chọrọ igbu m n’ime olulu. Ha nọkwa na-atụ m nkume. 54 Mmiri rikpuru m, mụ asị: “Nke m agwụla!” ק [Kof] 55 Jehova, esi m n’ime ime olulu kpọkuo aha gị.+ 56 Nụrụ olu m. Emechila ntị gị mgbe m na-etiku gị ka i nyere m aka. 57 Ị bịakwutere m n’ụbọchị m kpọkuru gị. Ị sịrị m: “Atụla egwu.” ר [Resh] 58 Jehova, i kpechitere ọnụ m.* Ị zọrọ mụ ndụ.+ 59 Jehova, ị hụlanụ ihe ọjọọ e mere m. Biko, kpeere m ikpe ziri ezi.+ 60 Ị hụlanụ ihe niile ha ji obi ọjọọ mee m, ya bụ, nkata ọjọọ niile ha kpaara m. ש [Sin] ma ọ bụ [Shin] 61 Jehova, ị nụla ka ha na-akparị m, nụkwa nkata ọjọọ niile ha na-akpara m.+ 62 Ị nụkwala ihe ndị na-emegide m na-ekwu nakwa izu ọjọọ ha na-agbara m ụbọchị niile. 63 Lewe ha. Ha na-agụ egwú ha ji achị m ọchị, ma mgbe ha nọ ọdụ ma mgbe ha guzo ọtọ. ת [Tọọ] 64 Jehova, ị ga-akwụ ha ụgwọ ihe ha mere. 65 Ọnụ ị ga-abụ ha ga-eme ka ha kpọchie obi ha. 66 Jehova, ị ga-eji iwe chụọ ha ọsọ ma kpochapụ ha n’ụwa.
^ O nwere ike ịbụ, “mee ka m tọgbọrọ nkịtị.”
^ Na Hibru, “ụmụ.”
^ Ma ọ bụ “ka mkpụrụ obi m ghara inwe udo.”
^ Na Hibru, “ihe dị mma.”
^ Na Hibru, “Ị ga-ehulatakwa.”
^ Ma ọ bụ “Ọ bụ ịhụnanya pụrụ iche Jehova na-egosi mere.”
^ Ma ọ bụ “nwee ndidi.”
^ Na Hibru, “ada bụ́ ndị m.”
^ Ma ọ bụ “Mkpụrụ obi m ahụsiela.”
^ Ma ọ bụ “i kpechiteere mkpụrụ obi m ọnụ ya.”
Abụ Ákwá 3